Of ngendwangu ingilazi angakhiqiza ezahlukene ijamo design, kodwa lokhu kudingeka ufunde indlela ukusika. Uma kukhona umsiki ingilazi, ungakwazi kalula babhekane nalesi msebenzi. Futhi uma akusiyo? Indlela ukusika ingilazi ngaphandle ingilazi umsiki? Eqinisweni, kunezindlela eziningana ukusika izinto usebenzisa ngamathuluzi ahlukahlukene, okuzoxoxwa ngezansi.
Ngaphambi kokuba uqale ukusebenza, ingilazi ngokwayo kuyadingeka ukulungiselela: ukugeza ngamanzi, degreased uphethiloli. Uma aboshelwe ohlakeni, kufanele ulungise umkhiqizo usayizi oyifunayo. Kulokhu ohlangothini ngalunye kumelwe okwengeziwe usike 2 mm impahla. Lokhu kusebenza kuphela ezenziwe ngokhuni, ngoba ukuhlehlela futhi ukwandisa lapho zihlatshwa weathering.
Ngaphambi ukusika ingilazi, kubalulekile ukuba alungiselele isikhala. Ukuze usebenze naye kuyodingeka etafuleni noma iyiphi ukuma. Lokhu kuzokwenza lula ahlabayo made futhi amandla awo ukusiza ngivule umkhiqizo. Uma wazi kahle kwento okufanele uthathe okokuqala, kufanele abaqeqeshelwé izingcezu ezincane, ukuqonda izimiso eziyisisekelo. Kungaleso sikhathi kuphela lapho ungakwazi uqhubekele ukusika amashidi ezinkulu.
ukuzisika ingilazi umsiki
Ngaphambi kokusebenzisa leli bhokisi lamathuluzi, udinga ukuthola indlela ukusika ingilazi ingilazi umsiki. I element ahlabayo kuhlelwe perpendicular kwamanzi futhi ngokunembile agudle ohlosiwe. On ithuluzi kancane bese ucindezela ngobumnene baqala "ku". Uma ukwenza yonke into imithetho ke uzozwa umsindo ingilazi cut kanye mncane umugqa omhlophe izovela eshidini. Creaking lapho cut libonisa ayilungile ngokutshekisa ithuluzi, okuholela ukuwohloka noma nengcindezi enamandla kakhulu.
Ngemva beshaya ingilazi ingilazi umsiki walala phezu onqenqemeni kwetafula (noma sezinyawo) ukuze bathole umugqa kancane ngale konqenqema. Ngesandla esisodwa udinga ubambe ishidi, kanye nezinye baba ingcindezi neveli ingxenye (kumelwe ewa). Uma izandla azisebenzi ke ungakwazi ngobumnene uthepha ngesando agudle ahlabayo. Uma kudingeka, inqubo iyaphindwa kusukela ekuqaleni.
Hhayi impahla obukhulu kakhulu kungenziwa wasika nge sikelo. Okokuqala kuyodingeka benze sakhiwo. Indlela ukusika ingilazi ngale ndlela? Kuyadingeka ukuba emanzini afudumele bese uthathe izingcezu usayizi oyifunayo. Uma ungazange ukusebenza noma impahla uqalile sidilike, bese bebanjwa ingilazi omnene (ikakhulukazi ukusika tibalwe lapha ngentasi). Ukuze ukusika izingcezu ezinkulu kudingeka kubhavu noma umcengezi omkhulu wamanzi.
Inqubo wenziwa kanje: ku ithiphu wokugubha eyenziwa sikelo bese uyeke isici ezingadingekile. Le ndlela kufanelekile ishidi kuya ku-3 mm obukhulu, futhi usike bobunjwa wabuka ngqo. Ukuze iwenze ube lula umsebenzi ibhodi ukwenza isifanekiso ukuthi sasondelana ingcina ukuze workpiece. Sicela uqaphele ukuthi into kuyoba pliable ngaphezulu ngaphansi ungqimba amanzi amaningi.
Twine, uphethiloli njalo
Njengoba kuchazwe ngezansi uzokutshela ukuthi ncamashi ukusika ingilazi uma kungekho umsiki ingilazi esandleni. Wonke umuntu uyazi ukuthi into asaba abukhali lokushisa ekushintshashintsheni. Le mpahla ongazithatha sinqume. Ukuze usebenze isidingo: Twine ukujiya esiphezulu 2 mm (kuphela ukotini), a lighter, fuel (kaphalafini).
Ishidi ingilazi ibekwe phezu kwetafula uhlaka umaka umugqa lapho kubalulekile anqunywe. Kala futhi wasika intambo ukuze ihlanganisa wonke cross-section kanye ubude bayo. Ngemva kwalokho, kuthululwe ngophethiloli futhi isetshenziswa imigca ingilazi. Twine kudingeka ashise ukuze zikhanyiswe lonke obuphelele. Lapho ngentambo uyaphuma, it is wathela ngamanzi abandayo. Ngenxa yalokho, lo ingilazi qhahaza endaweni umehluko lokushisa. Uma ufa awuhambanga phezu ishidi, udinga usuphinda futhi kancane ungqongqoze emgqeni cut.
ukusebenza yensimbi nokunamathisela ngomthofu
Indlela ukusika ingilazi uma isandla kuyinto yensimbi nokunamathisela ngomthofu? Indaba ibekwe phezu flat bese usebenzisa Needle ukwenza emaphethelweni izingozi. Ukuze lokhu sisetshenziswa futhi umugqa ngokuthinta yensimbi nokunamathisela ngomthofu Kuhlehliswe kuwo ngo 2-3 mm. endaweni efudumele njalo isidingo ukuze ingilazi aqhephukile. pass nokunamathisela ngomthofu yonkana locezu - ngakho-ke Kwatholakala kuhle bushelelezi.
Phula nezizenze ingilazi noma babeka phezu kwetafula. Rift kuyokwenzeka ncamashi emseleni banamathela eduze itheyiphu cut ingcina noma iphephandaba ezimanzi. Uma umkhiqizo kumele ifakwe uhlaka, kufanele amboze indawo yokufaka putty noma irabha emapheshana. It isetshenziswa uzimele futhi uphawu glazing ubuhlalu, okuyinto ibekwe ngaphansi kophawu zenjoloba.
Ngezansi sizoxoxa indlela ukusika kahle ingilazi ngepeniseli carbon (ungakwenza ngokwakho). It ikuvumela ukuba usike zamajamo ezihlukahlukene impahla. Okwenza ithuluzi isidingo: namalahle (lime birch) lomtholo. Amalahle kuyo ingumhlabathi kumuntu powder, gum arabic ingezwe nalokho wayixova uhlobo inhlama. Of isisindo ukwenza izinti round, ngemva bekene kahle omisiwe.
Ngaphambi ukusika ingilazi ukwenza isendlalelo inaliti amafayela nadpilivayut onqenqemeni. Ipensela umlilo uhlangothi futhi ngiwuphatha agudle. Lokhu kuphumela imifantu lapho umkhiqizo sinqamukile kalula.
Ukuphuca izinhlobo ezahlukene ingilazi
Lapho ukusika ingilazi evamile akufanele ube nenkinga yokukholelwa. Nge lo msebenzi ngeke uphathe ngamathuluzi ahlukahlukene, kusukela sikelo ekhethekile ingilazi bezihlahla. Kodwa indlela ukusika ingilazi omnene? Okulandelayo kuzoxoxwa ncamashi ukuthi. Ikhaya kungabuye usike kanye ezimazombezombe ingilazi organic.
imikhiqizo lukathayela bayindlala kakhulu, njengoba sifakwe umnyango, futhi imiklamo ehlukahlukene ingaphakathi. Lokhu kwaziswa kulula ukusika (kanye ingilazi evamile), ukuze ukwazi ukusebenzisa amathuluzi ngenhla. Khumbula ukuthi le ngxenye ethi, kumele kwenziwe ohlangothini bushelelezi.
Indlela ukusika ingilazi omnene? Eqinisweni, umkhiqizo ezifana ayikwazi usike ekhaya. Umsebenzi kungcono ishiyelwe izingcweti umshini nge wheel idayimane. Kudingeka wenze emulsion ekhethekile unesibopho ukupholisa ebusweni. Ungakwazi Ngokuqinisekile uzame ukusika ingilazi ingilazi umsiki noma grinder, kodwa ngisho ukuphambuka encane evela umugqa flat, izoqala ukuwa.
ingilazi Organic eyenziwe zokwenziwa resin futhi kufana kakhulu plastic. Ukuze ahlabayo yayo silingane amathuluzi kakhulu elula: umsiki, isaha, metal, zokubhala ummese , njll
Sika ucezu lwengilazi Indwangu kungaba ngokushesha futhi kalula namathuluzi ezivamile. Futhi indlela yokwenza mbobo it futhi ukuthi isidingo salokhu? Kumele agodliwe ezimanzi isihlabathi izinhlawulo, phambili (tin) futhi Isitsha ukuncibilika yayo, acetone isifanekiso. Isifanekiso induku nge ekupheleni ngesimo Isigaxa kabani ubukhulu kufanele zifane ubukhulu ukuvulwa esizayo.
Ukuze wenze umsebenzi, kumele:
ukubeka ingilazi phezu flat;
degrease imbobo futhi bafafazwe isihlabathi ukuze bathole i-slide 50 mm ukuphakama;
thatha isifanekiso futhi kwenze kube khona imbobo esiqongweni sentaba;
ncibilika abaholayo aluminiyamu noma koqweqwe lwawo imbiza (kungenziwa ukufuthelana kwi igesi noma Blowtorch);
uthele phambili ashisayo ukusakaza mncane ibe hopper esihlabathini;
ulinde imizuzu 5-7 bese ususa isihlabathi emhlabeni ukuvulwa;
umunwe siyihlolisise Ukupholisa ngomoya thusi bese uyalikhipha.
Ngaphansi yabalingisi ngeke ngempela orifice ekahle. Nokho, isakhiwo okuholela bufakwe kalula isibambo, izakhi okuhlobisa, iziqobosho nezinye izingxenye elithatha. Ngaphambi usike ingilazi ngendlela, kubalulekile ukuzijayeza ku ezilahliwe impahla, ukuze zichithe yonke indwangu.
Kulokhu okungenhla kuyacaca ukuthi ingilazi cut kungenzeka ngaphandle ekhethekile ingilazi bezihlahla. Nokho, kule nqubo udinga alandele imithetho ethile futhi sihlelekile ukuze kungabi bikho ukulimala indaba, futhi musa ngephutha ubuhlungu.
Isikhala seso spotlight: Izici kanye nokubuyekeza izindlela engcono
Indlela Craft e Unturned? Craft letigcogcwe ngaphambilini ngamathuluzi futhi ngaphandle kwazo